5T spool Rotate - တရုတ် Wuxi အောင်မြင်မှု Machinery
5T spool Rotate
ဝန်စွမ်းရည်:5တန်ချိန်အများဆုံး
ရေယာဉ်များအချင်း: Min.150mm ~ Max.900mm
လည်ပတ်ပါဝါ: ပန်ကာအအေးနှင့်အတူ2* 0.37 KW
လမ်း Adjust: ခဲဝက်အူ
control system: Remote လက်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာ
FOB စျေး: ။ 8, *** 00 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
spool Rotate အထူးဂဟေဆော်လုပ်ငန်းရဲ့အလုပ်လုပ်ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပိုက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအကြံအဖန်တွေချည်းလိုက်လျောညီထွေ, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံအလိုအလျောက်၏အတိုင်းအတာတိုးပွားလာ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်နေသည်။ ကကျယ်ပြန့်ဂဟေဆော်ရာတွင်အသုံးပြုနေသည်ဒါကြောင့်, ခဲဝက်အူကနေတဆင့်သင်္ဘောအချင်းညှိနှင့်ယိမျးမယိုသည့် workpiece fix ။
ဤတွင်အောက်တွင် 5T spool ဂဟေဆော်ခြင်း Rotate Specification ဖြစ်ပါသည်:
ဝန်စွမ်းရည်5တန်ချိန်အများဆုံး
ရေယာဉ်များအချင်း min ။ 150mm ~ Max.900mm
လည်ပတ်ပါဝါ ပန်ကာအအေးနှင့်အတူ2* 0.37kw
Rolls ဖျေါပွခကျြဖွင့်ဝက်အူညှိယူ spool ပိုက်ဦးဆောင်လမ်းပြ:
သင့်ရဲ့ပိုက်လည်းအရှည်လျှင်ကြိတ်စက်လှည် 1. အထူးဒီဇိုင်းဂဟေပိုက်အောက်မှာထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်။
အော်တိုဂဟေဆော်ရန်လက်ရုံးပေါ်ဂဟေဆော်ခြင်းသေနတ်များတပ်ဆင်ထားပြီး 2. spool ပိုက် roller, ccustomer လက်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာများမှတဆင့် 10 မီတာအတွင်းဂဟေဆော်သေနတ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ယင်းချုပ်ရိုးဂဟေညှိဘို့မရရှိနိုင်ပါ 3. ချုပ်ရိုး tracker ။
4. ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်း: လက်ကိုထိန်းချုပ်သေတ္တာ။
5. ဖြတ်တောက်ခြင်း Way ကို: Automatic ဂဟေ
6. ဂဟေဆော်ခြင်းနေရာချလှည့်ခြင်းနှင့်ဂဟေများအတွက်ပိုက် Clamp ။
8. ကျွန်ုပ်တို့၏ဂဟေလျှပ်စစ်စနစ်က Schneider ကနေ
Rolls, အသေးစားနှင့်အကြီးစား Rotate အပိုအစိတ်အပိုင်းများအမှတ်တံဆိပ်ဖွင့်အားလုံးသည်ဂဟေဆော်ခြင်း Rotate:
1.Our spool ဂဟေ roller အင်ဗာ Danfoss / Yaskawa ကနေဖြစ်ပါတယ်။
Rotate မော်တော် welding 2.Our ခဲဝက်အူညှိနှိုင်းမှု Invertek ကနေဖြစ်ပါတယ်။
3.Our spool ပိုက်ပြောင်းလဲလျှော့ချတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှမိတ်ဆက်။
ထိုကဲ့သို့သောရိန်း, Oil & Gas အဖြစ်ဆလင်ဒါဂဟေဆော်ရာတွင်အသုံးပြု 2. ဂဟေဆော်ခြင်း Rotate အဓိက, ကမ်းလွန်, အပူ Exchange ပန်းကန်; တရားစွဲဆိုလေထုအေး; ဖိအားသင်္ဘော; ဘွိုင်လာ; စသည်တို့ကိုပိုက်စနစ်က & သံမဏိအကျင့်ကိုကျင့်
အော်တိုစက်ဝိုင်းချုပ်ရိုးဂဟေဆော်သည်3။
4.Chemical & လောင်စာဆီသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ။
အဘယ်ကြောင့် Wuxi အောင်မြင်မှုစက် CO Choose, LTD မှ။
ရိုးရိုးသားသားနှင့်တရားမျှတသော 1.We ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော, ကသင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှုအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်သငျသညျအမှုဆောငျဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပျြောအပါးပါပဲ။
2.We အာမခံချက်အချိန်မှန်, အရည်အသွေးနှင့်ပမာဏတင်းကြပ်စွာစာချုပ်၏စည်းကမ်းချက်များအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
4. ကျနော်တို့ဖောက်သည်ပိုက်သည်နှင့်အညီအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဒီဇိုင်းရှိသည်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများသင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမှတက်မပေးနိုင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အသစ်တစ်ခုတဦးတည်းဒီဇိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ပို့ဆောင်မှုမပြုမီ 5.Commissioning နှင့်စမ်းသပ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်စပ်ဂဟေဆော်စက် ထုတ်ကုန်အမည်ဖြင့် ပိုက်ကွေ့ဂဟေဆော်ရာတွင်အသုံးပြု:
ဂဟေဆော် Rotate, weling နေရာချ, ဂဟေဆော် manipulater, လိပ်လှည်အသုံးပြုသောပိုက်, ဂဟေဆော်ခြင်းသည် Rotate, သမားရိုးကျဂဟေ Rotate, ပိုက်အကြံပေးအဖွဲ့ဂဟေ totator, လည်ပတ်ဂဟေဆော်စက်, Hydraulic Roator welding ဖိအားရေယာဉ်များ, သဲပေါက်ကွဲမှု Roll ဖွင့်, Automatic ဂဟေဆော်ခြင်း roller, Tank ကြိတ်စက်ဂဟေဆော်ခြင်းစက် , Cylinder ပိုက်ဂဟေဆော်ခြင်း rotate, သမားရိုးကျ Tank welding positioer ရုတ်သိမ်းပေးရန်, Rolls, ဦးခေါင်းကိုအမြီးစတော့ရှယ်ယာဂဟေနေရာချ, ဟိုက်ဒရောလစ်ဂဟေနေရာဖွင့်, အလျားလိုက်ဂဟေနေရာ, အမြင့်ညှိယူဂဟေဆော်ခြင်းနေရာချ, စားပွဲတင်ဂဟေဆော်ခြင်းနေရာချ Turn, စားပွဲတင်ဂဟေဆော်ခြင်းနေရာချ, ဂဟေဆော်ကော်လံစန်း, အော်တိုဂဟေဆော်ခြင်း Turn စန်း, Tank ပိုလန်စက်, ကော်လံနှင့်စန်း, ကော်လံပြီးတော့စန်းခြယ်လှယ်, ကော်လံစန်းဂဟေဆော်လုပ်ငန်း
ယခင်: ဟိုက်ဒရောလစ်နေရာဝင်ရိုး 5000kg 3
နောက်တစ်ခု: သမားရိုးကျဂဟေ Rotate
စံဝေးလံခေါင်ဖျားလက်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာနှင့်ခြေလျင်နင်း control.it အဆင်ပြေပြေနဲ့လုံခြုံနှင့်အတူ 1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမားရိုးကျ spool welding Tank ဖွင့် Rolls အားလုံးများမှာ
3000kg ဂီယာ tilt နေရာချ
ခြယ်လှယ် welding6×6မီတာ
40T သမားရိုးကျဂဟေ Rotate
1000kg ဌာနမှူး & အမြီးစတော့ရှယ်ယာနေရာချ